Ejipta · Marsa, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Ejipta · Marsa, 2019
Tantara mikasika ny Ejipta tamin'ny Marsa, 2019
Mediam-bahoaka 22 Marsa 2019
(Marihina fa tamin'ny volana Janoary 2010 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Na dia liana kokoa momba ny politikan'ny governemanta Egyptiana tamin'ny famerana ireo andian-tafika nalefa tany Gaza aza ny fampitam-baovao tao an-toerana sy iraisam-pirenena, dia tsy misy vaovao firy momba ny fanaraha-maso nataon'ny governemanta Egyptiana an'ireo mpikamban'ny andian-tafika. Nanambara ny manampahefana...
Mediam-bahoaka 18 Marsa 2019
Nitokona tsy nihinan-kanina nanomboka ny Alatsinainy 22 Aogositra i Maikel Nabil, bilaogera Ejiptiana voalohany nogadraina hatramin'ny nanombohan'ny revolisiona 25 Janoary. Nijanona tsy nisotro rano i Maikel tamin'ny 30 Aogositra. Nentina tany amin'ny hopitaly izy roa andro taorian'ny tsy fahatsiarovan-tena (coma) nahazo azy.
Ejypta: Nolavin'ny tribonaly miaramila ny fampiakarana fitsarana nataon'i Alaa Abdel
Mediam-bahoaka 15 Marsa 2019
Nolavin'ny tribonaly miaramila ao Kairo tamin'ny (3 Nov) ny fampiakarana fitsarana napetrak'ilay bilaogera menavazana Alaa Abdel Fattah ho an'ny famotsorana azy eo am-piandrasana ny fanadihadiana. Nogadraina tamin'ny 30 Oktobra nandritra ny 15 andro i Abdel Fattah rehefa tsy nety nataon'ny fitsarana miaramila fanadihadiana, ary nanizingizina ny zony hohadihadian'ny fitsarana sivily.
Nanome antoka ny mpanohana ny fanentanana #FreeAlaa fa tsy tokony hampisy ahiahy intsony izay fanemorana izao.
Mediam-bahoaka 08 Marsa 2019
Noafahana i Mahmoud ‘Shawkan’ Abu Zeid mpaka sary fanao an-gazety rehefa nigadra nandritra ny dimy taona mahery tany am-ponja
Fahalalahàna miteny 07 Marsa 2019
Nandany efa-taona teo ho eo nandritra ny fitazonana azy vonjimaika mialoha ny fanamelohana azy i Shawkan, izay niasa ho an'i Demotix tamin'ny fotoana nisamborana azy.
Pakistana 06 Marsa 2019
Ejipta : Nosamborin’ny tafika ary navotsotra avy eo i Wael Abbas
Fahalalahàna miteny 02 Marsa 2019
Nosamborin'ny tafika nandritra ny adiny iray teo ho eo ilay bilaogera fanta-daza mpiaro ny zon'olombelona Wael Abbas ka nahatonga ny namany sy ny olom-pantany nihetsika tamin'ny fikarohana azy. Nafahana izy taorian'izay. Ankoatra izany, mbola tsy misy vaovao momba ilay mpiasan'i Google Wael Ghonim, izay nanjavona ny 25 Janoary 2011.